Femke Halsema एक अनुमति बिना कानूनी र समूह गठन र 1,5 मिटर सामाजिक दूरी अपरिवर्तनीय प्रदर्शन गर्दछ: मार्टिन Vrijland
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	2 जून 2020 मा	• 18 टिप्पणिहरु
उनले वास्तवमै भनिन्, पछिल्लो रात बाँधमा अकल्पनीय प्रदर्शन पछि; Op1 मा Femke Halsema: प्रदर्शन अधिकार संवैधानिक अधिकार हो। त्यसोभए तपाईलाई कुनै अनुमति छैन। यी सबै राज्यको आकृति हुन् र हामी सबै आज्ञाकारी भएर यसमा संलग्न छौं, किनभने हामीले यो मिडियाद्वारा यो पहल गरेको हो भन्ने विश्वास गर्न सुरु गरेका छन।
होइन, तपाईंलाई प्रदर्शन अनुमति आवश्यक छैन। यो संवैधानिक अधिकार हो। वास्तवमा तपाईले कुनै कानून वा कानूनको पालना गर्नु हुँदैन जसले संविधानलाई कमजोर पार्छ। फेमके हालसेमाले हिजो जोडदार ढ .्गले प्रदर्शन गरे कि राजनीतिज्ञहरूलाई पनि उनीहरु जान्दछन् कि उनीहरूले संविधान पालन गर्नु पर्छ जे होस्, तिनीहरू केवल त्यसो गर्छन् यदि यो तिनीहरूलाई सूट।
यदि तपाईं वास्तवमै प्रोग्रामिंगको गहिरा तहहरूबाट बाहिर निस्कनुभयो भने, तपाईंले आफैंलाई खोज्नुहुनेछ तपाईंको मौलिक अधिकार के हो।
एम्स्टर्डमको बाँधमा हिजो दिउँसोको प्रदर्शन अवश्य नै योजनाबद्ध थियो। Femke स्लाइस Halsema को बहाना सर्प रोटी भाषा हो। तसर्थ उनको मौखिक जीभ swish। थोरै सोच्ने जो कोहीले देखेको हुन सक्छ कि एम्स्टर्डममा हिजो हिजो विश्वव्यापी विरोध प्रदर्शन अर्काेस्ट गरिएको छ (हेर्नुहोस्) यहाँ)। मा यो लेख मैले वर्णन गरे कि जर्ज फ्लोड कहानीले कसरी गृहयुद्ध सुरु गर्नुपर्दछ। त्यो मास्टर स्क्रिप्टको अंश हो जुन मैले पहिले नै मेरो नोभेम्बर २०१ in पुस्तकमा वर्णन गरें। त्यो पुस्तक पढ्नुहोस् ताकि तपाईं यसको आधारभूत ज्ञान लिनुहोस्।
यो लिपिमा एक टोपी मुनिको मिडिया, राजनीति र जनस the्ख्याको ठूलो अंशहरू (पूर्व GDR मा Stasi जर्मनी अन्तर्गत) कसरी (Inoffzieller Mitarbeiter) सबै काम गर्छन् भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। यो पूरै निर्देशन थियो कि बाँध 5000,००० मान्छेले भरियो। हामी पेशागत उथलपुथल देख्दैछौं जुन पश्चिममा अराजकता फैलँदैछ। यदि तपाईं बिल गेट्स कोरोना भाइरसको आगामी दोस्रो प्रकोपको साथ त्यो अराजकतालाई मिलाउनुहुन्छ भने, तपाईं चाँडै नै सामथ्य राख्ने बल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पेशेवर प्रदर्शनकर्ताहरूमार्फत र (चाँडै सायद) पेशेवर दंगा गर्नेहरूलाई थप्नको लागि, तपाईं आगो नियन्त्रित तरीकाले राख्न सक्नुहुन्छ।
फेमके हलसेमाको मोड र षड्यन्त्रलाई नजिकबाट हेर्नका लागि उपयोगी छ, किनकि राजनीतिमा पेशेवर झूटा बोल्नेहरूको यस किसिमको सीधा अनुहारले तपाईंलाई धोका दिन्छ।
यो क्रिस्टल स्पष्ट हुन दिनुहोस् कि उनी ओटी १ मा प्रसारणको बेला भन्छिन् कि उनी घाँटीबाट ठूलो च्याट गर्दैछिन् जब बाँधमा भीड यति ठूलो हुने कुनै संकेत पाइनन्। हामीसँग यसको लागि ठूलो डेटा संग्रह छ। स्वचालित एआई स्क्रिप्टले कुन फेसबुक समूहको भ्रमण गरिरहेको छ भनेर ठ्याक्कै जान्दछ र कुन व्यक्ति र समूहले के गर्न चाहन्छ भनेर जान्न सक्छ, १ फेसबुक वा ट्विटर समूहमा लगइन नगरीकन। उनीहरू कति जना डम स्क्वायरमा आउनेछन् भनेर तिनीहरूलाई ठीकसँग थाहा थियो। यसमा फेमकेको योजनाले राज्यबाट सामाजिक दूरी डाटालाई अवलोकन गर्न कानुनी बनाउन ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ (ठूलो डाटा स collection्ग्रह)।
सबै केसहरूमा, राज्यले गर्ने सबै कुरा, यो नगरपालिका वा राष्ट्रिय स्तरमा होस् वा यो लगभग एक मिटर वा आधा वा समूह गठन हो; सबै कुरा संविधानसँग मिल्दैन। यसैले जहाँ फेमकेले स्पष्ट रूपमा भने कि उनले वास्तवमा अनुमति अस्वीकार गर्नु हुँदैन (तल भिडियो हेर्नुहोस्), किनकि यो संवैधानिक अधिकार हो, यो सबै कुरामा लागू हुन्छ जुन तपाईंलाई यो कोरोना स during्कटमा (र यसभन्दा पहिले पनि धेरै पटक) जबरजस्ती गरेको थियो।
राजनीतिज्ञ र मिडियाले बेचेको मुकुटमा हस्ताक्षरित कानूनहरू लोकतन्त्रको माध्यमबाट जनताको घाँटी भित्र पस्छन्। वास्तविकतामा, यो मुकुटले हस्ताक्षर राख्छ। सबै भगवानको असीम अनुग्रहबाट।
लगभग सबै कानूनले तपाईको गोपनीयता मात्र होइन, तर सबै संविधान माथि उल्ल .्घन गर्दछ। त्यो भन्दा पहिले, धेरै जसो कानूनहरूले तपाईंको मौलिक अधिकार र मानवता उल्ल .्घन गर्दछ।
वर्षौंको दौडान हामी हलसेमा जस्ता सर्पहरू र राजनीतिमा अन्य धेरैले यत्ति प्रोग्राम गरेका छौं कि अब हामी यसलाई देख्न सक्दैनौं। मार्क रुट्ट, ह्युगो डे जोन्ज र स्मार्ट-गधा कुरा गर्नेहरूको सम्पूर्ण कठपुतली बिक्री संगठन, बायाँ र दायाँ, उदार, हरियो, रातो वा बैजनीको उपस्थिति समात्नुहोस्; गलत प्रजातन्त्र।
प्रजातन्त्र एक प्रहसन हो र तपाइँको मौलिक अधिकारहरु पूर्वनिर्धारित द्वारा सात माईल जूते संग trod छन्। बाहिर जाने एक मात्र तरिका भनेको यी फीनिसलाई उनीहरूको फीनि power्ग शक्तिबाट मुक्त गरी प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको माध्यमबाट आफैंलाई नियन्त्रणमा राखेर हो। त्यसो गर्नका लागि, तपाईंले बुझ्नु आवश्यक छ कि तपाईंलाई तपाईंको क्रडल-टु-ग्रेभ प्रोग्रामिंगको कारण कत्तिको राम्ररी छल गरिएको छ, र कसरी तपाईं यसलाई विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ किनकि तपाईं वरपरका सबैले उहि प्रोग्रामिंग पार गरिसकेका छन् र प्रणालीको भाग हो। उदाहरण को लागी, प्रणाली निर्भरता र 'मलाई कुनै राम्रो थाहा छैन' द्वारा कायम छ।
यो क्रान्ति र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको समय हो जसमा हामी पुरानो राजनीतिक सर्प पिट खारेज गर्छौं र यसलाई सार्वजनिक रूपमा प्रयास गर्दछौं। अब हामी आफैले नेता छनौट गर्ने समय आएको छ। अब हामी आफैले हाम्रा कानूनहरु अपनाउने समय हो। अब हामी आफैले कार्य गर्ने समय आएको छ। प्रत्यक्ष लोकतन्त्रले यसलाई सम्भव तुल्याउँछ। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र मात्र द्रुत साध्य समाधान हो। त्यसैले माथि हेर्नुहोस् www.fvvd.nl वा बटन क्लिक गर्नुहोस्।
यदि तपाईं सामाजिक दूरीमा टाँस्नुहुन्न - एक र आधा मिटर - त्यसो भए यो हुन्छ (स्तब्ध छविहरू)
ट्याग: एक र आधा, एम्स्टर्डम, कोरोनाभाइरस, बाँध, सही प्रदर्शन, दूरी, विशेष, Femke, संविधान, हल्सेमा, मीटर, Op1, सामाजिक
2 जून 2020 मा 15: 24
सबै खुला छ
मुख मास्कहरू बन्द
१. 1,5 मिटर: बकवास बेवास्ता गर्नुहोस्
सबै असंवैधानिक, असंवैधानिक र अमानवीय
फाइनहरु त्यहाँ फाल्न को लागी छन्!
2 जून 2020 मा 17: 27
र नगदमा सबै भुक्तान गर्नुहोस्
2 जून 2020 मा 22: 47
१ + १ =…
मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा टेलिकम डाटा संकलनका लागि आपतकालीन कानून पठाउछ
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले एक आपतकालीन कानून ल्याएको छ जसले RIVM लाई एक बर्षको लागि प्रसारण टावरबाट डाटा हेर्न अनुमति दिन्छ। डच डेटा संरक्षण प्राधिकरणको आलोचना प्रक्रिया पछि, आपतकालीन कानून आज प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो।
आपतकालीन कानूनले टेलिकम प्रदायकहरूबाट प्रसारण मस्ट डाटा संकलन गर्न सार्वजनिक स्वास्थ्य र वातावरणको लागि राष्ट्रिय संस्थानको लागि सम्भव बनाउँछ। RIVM त्यो डाटा कोरोनाभाइरसको वितरण नक्शा प्रयोग गर्न चाहन्छ। डाटाको आधारमा, RIVM ले स्वास्थ्य वा उपायहरू कडा गर्न वा आराम गर्न सरकार वा सुरक्षा क्षेत्रलाई सल्लाह दिन सक्छ।
सबै चीजहरू # कोविड १ 1984 XNUMX को आडमा अनुमति छ
3 जून 2020 मा 12: 42
त्यसोभए यो आराम चाहिन्छ।
2 जून 2020 मा 16: 00
यो व्यवसायीहरु, कर्मचारियों को लागी एकजुट हुन र राज्य गुमाएको आय को लागी व्यक्तिगत रुपमा मुद्दा हाल्ने समय हो। बाहिर निकाल्नुहोस् !!
जर्मन आधिकारिक लीक्स रिपोर्टले कोरोनालाई 'ग्लोबल फेलस अलार्म' को रूपमा निन्दा गरेको छ।
जर्मनीको संघीय सरकार र मूलधारका मिडिया क्षति नियन्त्रणमा संलग्न छन्। उक्त रिपोर्टले आन्तरिक मन्त्रालयबाट फुटेको कोरोना कथालाई चुनौती दिएको छ।
केही रिपोर्ट कुञ्जी खण्डहरू हुन्:
कोविड १ of को खतरनाक अवस्थालाई बढाइचढाइ गरिएको थियो: नयाँ भाइरसले देखाएको जोखिम कुनै पनि हालतमा सामान्य तहभन्दा बढी हुन सकेन।
कोरोनाबाट मर्ने व्यक्तिहरू आधारभूत रूपमा ती हुन् जो यस वर्ष तथ्याically्कको रूपमा मर्नेछन्, किनकि उनीहरू आफ्नो जीवनको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् र तिनीहरूको कमजोर शरीरहरूले कुनै पनि अनियमित दैनिक तनावको सामना गर्न सक्दैनन् (वर्तमानमा लगभग १ 150० भाइरसहरू संचलनमा छन्)।
विश्वव्यापी रूपमा, एक बर्षको एक चौथाई भित्र, त्यहाँ कोविड १ from मा २ 250,000,००० भन्दा बढी मृत्यु भएको छैन, इन्फ्लूएन्जा तरंग २०१ 19/१ during मा १ Germany लाख [जर्मनीमा २ 1.5,१००] मृत्युको तुलनामा।
खतरा अन्य धेरै भाइरस भन्दा ठूलो कुनै पक्कै छ। त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन कि यो झूटो अलार्म भन्दा बढि थियो।
एक निन्दा यी लाइनहरूमा जान सक्छ: कोरोना स During्कटको बेला राज्यले फेक न्यूजको सबैभन्दा ठूलो उत्पादकको रूपमा प्रमाणित गरेको छ।
बेन्जो वाकर लेखे:
2 जून 2020 मा 16: 32
बाँधमा त्यो प्रदर्शन सम्भवतः केही हप्ता पछाडि सबैलाई राख्न दोस्रो लहरको कारणको रूपमा प्रयोग हुनेछ।
2 जून 2020 मा 17: 38
3 जून 2020 मा 11: 54
हालसेमा, यदि यो उनको वास्तविक नाम हो भने, उनी काबालिस्ट हुन् र सामान्यतया संदिग्ध अब्रामोविच उनको लिखित पुस्तिका "पावर एण्ड इमेजिनेसन" मा थिइन। हुनसक्छ उनले माकिआवेलीबाट केहि .ण लिएकी छिन्। सम्राटको कुनै लुगाहरू छैन, यो बिरामी मानिसहरूबाट आफूलाई टाढा राख्ने व्यक्तिको रूपमा समय आएको छ।
अपवाद बाहेक तिनीहरू तथाकथित शाही घर सहित सबै काबालिस्टहरू हुन्।
3 जून 2020 मा 18: 33
विश्वभरिका सरकारहरू आफ्नै जनसंख्यासंग शाब्दिक रूपमा लडिरहेका छन् र आफ्नै जनसंख्यामा बढी वा कम नरसंहार गरिरहेका छन्, र ती नै सरकारहरू आफ्नै जनसंख्याको बीचमा पहिले कहिल्यै लोकप्रिय भएको छैन।
मास हिस्टेरिया? मास दिमाग धुने? र मास सम्मोहन?
फेमके हालसेमा घटनासँग धेरै गोलहरू छन्। मलाई लाग्छ कि ती मध्ये एउटा पनि परीक्षण मुद्दा हो यो हेर्नको लागि कि जनसंख्या कति सुतिरहेको छ र यसलाई जागृत नगरी स्वीकार्छ। अहिले सम्म रुट्ट र को को लागी एक ठूलो सफलता।
4 जून 2020 मा 10: 13
4 जून 2020 मा 23: 13
कोविड १ 1984 XNUMX फियास्कोको कफिनमा अर्को कील, ज्यादै ठूलो क्षतिहरू दाबी गर्ने मामला हरेक दिन ठूलो हुँदै गइरहेको छ। र ECB मा क्रिस लगार्डेको नीतिसँग, यसको लागि भुक्तानी गर्न को लागी एक हावा हो 😉 सबै संस्थाहरूले द्रुत रूपमा विश्वसनीयता गुमाइरहेका छन्।
एक अश्लील अभिनेता, एक असफल इम्पीरियल कलेज डेटा मोडेल यो दिन द्वारा क्रेझियर हुँदैछ:
सर्जिस्फेयर, जसका कर्मचारीहरू साइ-फाइ लेखक र वयस्क सामग्री मोडेल समावेश गर्दछन्, ल्यान्सेट र न्यू इ England्गल जर्नल अफ मेडिसिन हाइड्रोक्साइक्लोरोक्विन अध्ययन पछाडि डाटाबेस प्रदान गर्दछ।
ल्यान्सेटले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइनमा ठूलो अध्ययन फिर्ता लिन्छ
विश्व स्वास्थ्य संगठनले मलेरिया औषधि हाइड्रोक्साइक्लोरोक्वाइनमा कोरोनाभाइरसको परीक्षण पुन: परीक्षणको लागि सुरक्षा बमोजिम जाँच गरे
6 जून 2020 मा 13: 29
उपायहरूको बारेमा भ्रम समाप्त गर्न नयाँ कोरोना कानून
अनिवार्य रूपमा एक र आधा मीटर टाढा राख्नुहोस् वा अन्यथा। त्यो उपाय, जुन अझै अस्थायी छ, स्वास्थ्य मन्त्री ह्युगो डे जोन्जेको विशेष कोरोना कानूनमा लch्कर हुनेछ।
ठीक छ, तिनीहरूले यो फेरि गरे, तपाईं यसलाई सफा गर्नुहोस् र मादुरोडम बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको बाँकी स्वतन्त्रता लुट्नुहोस्। यो टिन्सेल किनाराको साथ एक पदकको योग्य छ
6 जून 2020 मा 15: 00
सबै प्यारा मानिसहरू कानून छ, किनकि हामी अदृश्य शत्रुसँग व्यवहार गरिरहेका छौं। "शक्ति र कल्पना" KUCH I के मँ अधिक भन्न आवश्यक छ ..
डच डेटा संरक्षण प्राधिकरण (एपी) अनुहार मान्यताका लागि क्यामेराको गैरकानुनी प्रयोगको विरुद्ध चेतावनी दिन सुपरमार्केटको उद्योग संघलाई एक पत्र पठाएको छ।
6 जून 2020 मा 17: 13
मादुरोडममा संयोगले केहि पनि हुने गर्दैन स्क्रिप्टको अनुसार सबै कुरा जान्छ। किसानहरू जग्गा बाहिर खेद्छन् र खाली प्लॉटहरू डाटा केन्द्रहरूले भरिन्छ .. के तपाईंलाई लाग्छ कि बहादुरी नयाँ संसार?
6 जून 2020 मा 18: 26
"- एम्स्टर्डमको नगरपालिकाले बाँधमा बन्दकर्तालाई अनुदान दिन्छ -
लगभग 5.000,००० मानिसहरू सोमबार बाँध स्क्वायरमा भेला भए। संयुक्त राज्य अमेरिकामा उनीहरूले कथित जातिवादको विरोध गरे। मेयर फेमके हालसेमाको आशिष्का साथ। वास्तवमा उनको शहर काउन्सिलले आयोजकहरु मिचेल एसाजस र जेरी अफ्रीइलाई पर्याप्त अनुदान दिन्छ। "
यो कति क्रेझिएर पाउन सक्छ?
7 जून 2020 मा 01: 02
त्यो लाज र विचलित जानकारी हो कि यो प्रभाव दिनको लागि थोरै रकम सब्सिडी भइरहेको छ ताकि हामी विशेष गरी 5000००० व्यक्तिको सम्पूर्ण भीडलाई भुक्तान गरेर त्यहाँ उभिएनौं भन्ने छैन।
7 जून 2020 मा 14: 04
उही पानाको सूटको विलुप्त हुने विद्रोह, सबै कुरा सामान्य संदिग्धहरूको एजेन्डा गरीरहेको हुन्छ। र यदि तपाइँ केही उपयोगी बेवकूफहरू बाटोमा हिंड्न र भुक्तान गर्न दिनुहोस्, त्यो पक्कै राम्रो बोनस हो।
तपाईं अब यो पनि देख्नुहुनेछ कि तथाकथित कोविड वित्तीय समर्थन प्याकेजहरू जलवायु उद्देश्यसँग जोडिएको छ, एउटा ढु with्गाको साथ दुई चराहरू। त्यसोभए सामान्य संदिग्धहरूले यसलाई सम्पन्न गर्ने योजना बी थियो, काल्पनिक भाइरस / काल्पनिक मौसम एजेन्डा। गोयिमलाई नियन्त्रण गर्न सबै नियन्त्रण संयन्त्रहरू।
7 जून 2020 मा 22: 40
गोयिमको कुरा गर्दै, शनिबार ओप १ को प्रसारणले कल्पनालाई केहि पनि छोड्दैन, जनावरहरूको बारेमा अचेल सन्देशहरू तपाईको टाउको वरिपरि उड्दछन्। घृणित टेलिभिजन, हामी यो भन्न नपरौं कि डच प्रचार प्रसारकको प्रमुख को हो।
« बाँध स्क्वायरमा हजारौं व्यक्तिहरूले जर्ज फ्लोइडको लागि विरोध प्रदर्शन गरे वा कसैलाई थाहा छैन?
डोनाल्ड ट्रम्पले वीणा बजायो भने रोम जलिरहेको बेला सम्राट नेरोले जस्तै »
कुल भ्रमण: 4.169.176